जोसिला जोर्गिन्हो- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
ब्राजिलको बिचबाट उदाएका जोर्गिन्हो बालोन डी’अरको प्रत्याशीसम्म
भाद्र १२, २०७८ बीबीसी
लन्डन — युरोको उपाधि दिलाएपछि जोर्गिन्हो प्रि सिजनमा चेल्सीको अभ्यास मैदान फर्केका थिए, कपाललाई सुनौलो रंगले रंगाएर । पछिल्लो सिजन उपाधि जित्ने बानी परेपछि यो ठीकै पनि हो । साथी हाकिम जिएचले उनको नयाँ रूप देखेर भनेका थिए, ‘कत्ति नराम्रो ।’
यसैले देखाउँछ, जोर्गिन्हो कति धेरै आत्मविश्वासी भएका छन् भनेर । आखिरमा उनी युरोपेली क्लब फुटबलका राजा भएका छन् । गत महिना उनी इटालीका त्यस्ता ११ औं खेलाडी भए, जसले एकै सिजन च्याम्पियन्स लिग जिते अनि युरोपेली च्याम्पियनसिप । बिहीबार रातिमात्र उनले त्यसमा यूईएफएको २०२०–२१ को वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी पुरस्कार जितेका छन् । उनले उक्त पुरस्कारका लागि क्लबकै एन’गोलो कान्टे र म्यानचेस्टर सिटीका केभिन डी ब्रुयनेलाई पछाडि पारेका थिए ।
खासमा जोर्गिन्होको कथा हो, ब्राजिलको बिचबाट वेम्बलीको प्रसिद्ध जितसम्म । ७४ दिनको अन्तरमा उनले उपाधिको ह्याट्रिक गरे । तीन साता अघिमात्रै चेल्सीले भिल्लारियललाई हराएर सुपर कप जितेको थियो । यी २९ वर्षीय खेलाडीको उपाधि जित्ने भोक बढ्दो छ । उनले किशोर उमेरमै घर छाडे । इटालीमा बिताएका सुरुआती दिन साताको २० युरो कमाउँथे । अब यिनै जोर्गिन्होलाई नेपोली र चेल्सीका पूर्वप्रशिक्षक माउरिसियो सारीले बालोन डी’अरको प्रत्याशीसम्म भनेका छन् ।
उनका साथी काइ हाभर्टेजले पनि ठीकै भनेका छन्, ‘कसैले एकै सिजन च्याम्पियन्स लिग र युरो जित्छ भने उनी त्यसको (बालोन डी’अर) हकदार भएको नै हुन्छ । उनीसँग खेल्नुको मज्जा नै बेग्लै छ ।’ यूईएफए वर्ष खेलाडीले उनलाई बालोन डी’अरको बलियो दाबेदार बनाएको छ । तीन वर्षअगाडि जोर्गिन्हो र सारी दुवैले नेपोलीबाट चेल्सीको यात्रा तय गरेका थिए । यी मिडफिल्डरका लागि तिरिएको मूल्य थियो, ५ करोड ७० लाख पाउन्ड । लगत्तै उनी आफ्नी आमा मारिया जेरेजासँगै चेल्सी क्लबको पसल पुगे । त्यहाँ उनको नाम अंकित जर्सी देखेर आमाले आँसु नै रोक्न सकिनन् । सानो छँदा जोर्गिन्होका प्रशिक्षक अरू कोही नभएर तिनै आमा थिइन् । तर चेल्सीमा सुरुआती दिन खराब साबित भयो । सारीसँग जोडिएर आउने हुँदा उनलाई सारीको छोरा पनि भनियो । समर्थकले उनलाई उडाउन थालेका थिए । युरोपा लिग जिते पनि सारीले एक वर्षमै चेल्सी छाडे । उनी इटाली फर्के र युभेन्ट्समा आबद्ध भए । जोर्गिन्हो भने चेल्सीमै रहे । उनलाई आफ्ना नयाँ व्यवस्थापक फ्रान्क लाम्पार्डको मन जित्नु थियो । भलै, चेल्सीको कीर्तिमानी गोलकर्ताको मनमा उनीबारे सबै राम्रो सोच थिएन ।
सन् २०१९ मा डब्लिनमा भएको अभ्यास सत्रपछि त लाम्पार्डले दंग खाए, जोर्गिन्होको खेल हेरेर । खासमा जोर्गिन्हो मैदानमा मात्र होइनन्, बाहिर पनि आफ्ना सहकर्मीका लागि ज्यान फाल्ने खालका थिए । यस्तोमा लाम्पार्डले उनलाई नै केन्द्रमा राखेर टिम बनाउन सुरु गरेका थिए । पछि चेल्सीमा नयाँ व्यवस्थापक थोमस टचेल पनि आए । उनको रेखदेखमा जोर्गिन्हो अझै माझिएका खेलाडी बने । चेल्सीका समर्थकले उडाउँदा पनि उनमा आफूले एकदिन प्रमाणित गरेर देखाउन सक्ने विश्वास थियो ।
यस्तै विश्वास उनी ब्राजिलमा छँदा थियो । उनलाई आमाले दक्षिण ब्राजिली राज्य सान्टा क्याटरिनामा हुर्काइबढाइ गरेका थिए । भर्खर १३ वर्षको फुच्चे खेलाडी भए पनि फुटबल खेल्नकै लागि २०० किलोमिटर टाढाको विद्यालय जान्थे । पछि १५ वर्ष पुगेका थिएनन्, इटालीको भेरोना पुगे । सुरुआती दिन पक्कै गाह्रो थियो । आखिरमा प्रत्येक साता २० युरोले के नै गर्न पुग्थ्यो र ? उनी स्कुल जान्थे, नियमित अभ्यास गर्थे । उनी मिहिनेती थिए ।
जोर्गिन्होले तय गरेको यात्रा सायद फरक हुन सक्थ्यो । सन् २०१८ मा चेल्सी जानु अगाडि उनलाई म्यानचेस्टर सिटीले किन्न खोजेको थियो । उनलाई लिएर भनिएको थियो, जोर्गिन्हो युरोपमा उपलब्धि सबैभन्दा राम्रा मिडफिल्डर हुन् । हुन पनि उनकै खेलका कारण नेपोलीले झन्डै सिरी ‘ए’ को उपाधि जित्न लागेको थियो । पछि दोस्रो स्थानमै मात्र रह्यो । त्यतिबेला उनीसामु जीवनकै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न तेर्सिएको थियो, ब्राजिलका लागि खेल्ने कि इटालीका लागि ?
नेपोलीमा छँदा ब्राजिलकै एलानसँग उनको खुबै दोस्ती जमेको थियो । मैदानमा पनि उनीहरूको साझेदारी गज्जब थियो । तर पछि फरक के भयो भने जोर्गिन्होले इटालीबाट खेल्ने निर्णय गरे । एलानले ब्राजिलकै लागि । सन् २०१६ मा इटालीले उनलाई पहिलोपल्ट राष्ट्रिय टिममा चयन गरेको थियो । जोर्जिन्हो के मान्छन् भने इटालीले यस्तो रूचि देखाएपछि मात्र ब्राजिलले उनमा नजर राख्न सुरु गरेको थियो । आफ्नी हजुरआमाका कारण उनले इटालीका लागि पनि खेल्थ पाउँथे ।
अन्त्यमा जोर्गिन्होले इटालीबाट नै खेल्ने निर्णय गरे । उनका ब्राजिली साथी एलान भन्छन्, ‘उनले ठीकै निर्णय गरे । पछिल्लो समय जोर्गिन्होले जे जति सफलता चुमे, त्यसका लागि पनि पूर्ण हकदार छन् । उनले आफ्नो अहिलेको खेलजीवनका लागि निकै कडा मिहिनेत गरेका छन् । अभ्यासमा पनि उनी शतप्रतिशत मिहिनेत गर्छन् । त्यसैले उनको अहिलेको सफलतामा कोही कसैले आश्चर्य नमाने हुन्छ ।’
प्रकाशित : भाद्र १२, २०७८ ०९:०७